बाँस एरो कसरी बनाउने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> घरेलु हतियारहरू >> बाँस एरो कसरी बनाउने
यसका लागि हामीलाई पहिलो चीज चाहिन्छ बाँसको खम्बा। यदि तपाईंसँग वा अरूले बाँस रोपेको व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्न र तपाईंलाई उचित मोटाईको केनहरू दिन सक्नुहुन्छ भने, तपाईं किनमेल केन्द्रहरू मार्फत रोक्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तिनीहरूले तपाईंलाई सजावटको तत्वको रूपमा बाँस बेच्नेछन्।
तपाईले देख्नुहुने छ, डण्डहरू सिधा छैनन्, त्यसैले तीरको रूपमा प्रयोग गर्न हामीले त्यसलाई सीधा गर्नै पर्छ। यसको लागि हामीले बाँसलाई तताउनु पर्छ र मोर्चाको विपरित दिशामा फ्लेक्स गर्नुपर्दछ। पहिले हामी ईन्टर-नोड सेक्सनहरू सिधा र नोडहरू आफैं बनाउँदछौं।
र हामी हाम्रो नर्कहरू फेर्नका लागि तयार हुन्छौं तीरहरू.
उखानहरू सीधा भएपछि, हामी तिनीहरूलाई इच्छित लम्बाइमा काट्छौं, दुई सेन्टिमिटर बढी छोड्दा ध्यान दिईन्छ र स्यान्डर वा ग्राइन्डरको साथ हामी नोडहरू कम गर्छौं ताकि यो छविमा सकेसम्म सजीलो हुन सकोस्।
एकपटक यो गरिसकेपछि, हामी सिधा गर्दछौं तीरहरू तिनीहरूलाई तताउँदै।
तपाईंले देख्नु भएको छ, यो निचोडहरू बनाउने समय हो। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्, तपाईंलाई सबैभन्दा मन पर्ने एउटालाई छनौट गर्नुहोस्। यहाँ हामी छविलाई सजिलै आकार दिन्छौं र बाँसलाई कडा बनाउन तातो पार्दछौं। जलेको बेलामा सावधान हुनुहोस्, किनकि जब तपाईले बाँसको कोर देख्नुहुन्छ तन्तुहरू तुरुन्तै प्रज्वलित हुन्छन्।
यो फेदर समय हो। हाम्रो तीरहरू तिनीहरूलाई विचलित नगरी पथलाई अनुसरण गर्न प्वाँख चाहिन्छ। कलमहरू किन्नु नै हामी उत्तम काम गर्न सक्छौं। हाम्रो अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेका छौं टर्कीको प्वाँख रंगे तिनीहरू ब्यारेलको बीचमा काटिन्छन् र ड्रेमेलसँग यसलाई सकेसम्म सहज रूपमा छोडिन्छ।
यसको लागि प्वाँखहरू १२०º राख्नुपर्दछ, तिनीहरूलाई राख्दा टेम्पलेट बनाउनु उत्तम हुन्छ।
तिनीहरूलाई समात्न हामी डोरी प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। यो गोंद वा गोंद प्रयोग गर्न द्रुत हुनेछ, तर हामी पूर्ण रूपमा परम्परागत तीरहरू बनाइरहेका छौं। छविमा हेर्नुहोस् कि यो कसरी बाँधिएको छ र कसरी डोरी पखेटाको साथ हेलिकल तरिकामा पारित गरियो।
अन्तमा हामी कसरी रोपिको पछाडि मिल्दछन् त्यसको विवरण हेर्छौं।
हामीसँग छ फ्लेचा % ०%, तर हामी एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हराइरहेका छौं, एरहेड.
हामी टिप सम्मिलित गर्न शाखा हाल्छौं, हामीले यसलाई किन्नुपर्दछ वा आफै सिर्जना गर्नुपर्दछ। यस अवस्थामा र सुरक्षाको लागि हामी बाँससँग पेसिंगको अतिरिक्त, खाममा टिप्स टाँकाउँछौं। त्यसपछि हामी यसलाई रेशम धागाले कभर गर्दछौं ता कि यसले हामीले दिएको डिजाइन हराउँदैन।
हो सज्जनहरू र हामीसँग पहिले नै छ हाम्रो परम्परागत बाँस तीर.
कसरी प्रतिलिपि गर्ने वा विनाइल रेकर्डहरू नक्कल गर्ने
"बाँसको साथ तीर कसरी बनाउने" मा १२ टिप्पणीहरू
जुलाई १, २०१ साँझ :26::2014 बजे
Everyoooooooooooooooooooo Nacho सँग छ
जुलाई १,, २०१ 27 बिहान १::2014
सत्य यो हो कि मैले पनि उस्तै गरें र मैले एउटा कुकुर पनि लिएँ र मलाई गोली हान्न पनि गाह्रो भयो र मैले यो दोस्रो पटक पनि गरें र यदि यसले काम गर्यो भने
जुलाई १,, २०१ 28 बिहान १::2014
अब तपाइँ एक एटलटल र विशाल डार्टहरू बनाउन आवश्यक छ